फेसबुकमा भाइरल GRATULA के हो ? – यस्तो छ वास्तविकता ! – Life Nepali
फेसबुकमा भाइरल GRATULA के हो ? – यस्तो छ वास्तविकता !
काठमाडौं। फेसबुकमा भाइरल भैरहेको शब्द ग्राटुला GRATULA बारे सबैलाई भ्रम परिरहेको छ । अहिले यसको आतंक नै मच्चिएको छ । फेसबुक प्रयोगकर्ताहरू सधैजस्तै यो पल्ट पनि झुक्किएका छन् । धेरैले आफ्नो वालमा पेस्ट गर्ने हतारो गरिरहेको GRATULA शब्द रातो हुँदैमा शुरक्षित हुने होइन र यो कुनै फेसबुकका मालिकले बनाएको शब्द पनि होइन ।
केहि समय अगाडी चलेको BFF जस्यै आतंक हो । फेसबुकका संस्थापकले एउटा शब्द बनाएको रे GRATULA अनि त्यो शब्द कमेन्टमा लेख्दा रातो आयो भने तपाईँको फेसबुक ह्याक नभएको अनि कालो भयो भने चाहिँ ह्याक भएको भनेर लेखिएको छ। यो गलत हो। रातो आउनु र नआउनुले फेसबुक ह्याक भएको वा नभएकोसित कुनै सम्बन्ध राख्दैन।
GRATULA हङ्गेरी भाषाको शब्द हो। यसको अर्थ बधाई भन्ने हुन्छ। जसरी बधाई कमेन्टमा लेख्दा रातो हुने गर्छ, त्यसरी नै उस्तै अर्थ दिने हङ्गेरी भाषाको शब्द भएको हुनाले GRATULA लेख्दा पनि रातो हुने गरेको हो। एक नेपालीले रमाइलो ग्रुपको लागी बनाएको मजाक पोस्ट यति खेर नेपाली सामाजिक सन्जाल फेसबुक प्रयोग कर्ताहरुमा भाइरल नै बनेको छ। तर बास्तबिकता आफ्नै सम्झनु होस् नेपाली मा बधाई / badhai लेखेर चेक गर्नुहोस् सत्य तेही नै हो।
यस्तो छ भाइरल पोस्ट ‘
Facebook – फेशबुक चलाउने सबै मित्र हरुलाई अत्यन्तै जरुरी सुचना । याे अनलाइन बाट सावार गरिएको हाे । फेसबुकका पिता मार्क जुकेरर्बगले GRATULA भन्ने एक वटा वाक्य सिर्जना गर्नुभएको छ । जुन हजुरहरुको फेसबुक अकाउन्ट् सुरक्षित छ वा कसैले ह्ययाक गरिरहेको अथवा ह्ययाक गर्न कोशिस गरिरहेको छ।भनेर थाहा पाउन तर कमेन्ट बक्समा अङ्ग्रेजीको ठूलो अक्षरमा(GRATULA) टाईप गरि पत्तालगाउहोस्,यदि हजुरहरुको GRATULA शब्द रातो अाएमा हजुरहरुकको फेसबुक सुरक्षित छ । यदि कालो अाएमा कसैले ह्ययाक गर्ने कोसिस गरिरहेको छ भनेर बुझ्नुहोला र तुरुन्त अाफ्नो फेसबुकको पासवार्ड बदल्नु होला, अाफु पनि पढाै अरुलाई पनि सियर गराै धन्यवाद ।
Previous बनेपामा जापानी प्रविधिबाट फोहर व्यवस्थापन गरिने !
Next सातवटा सुरुङमार्ग बनाउँदै सरकार